Kedụ ka m ga-esi aza ekpere m? | Ahụrụ m Jizọs n'anya
Zaa ekpere m: Chukwu anaghị anụ olu okwu nke ekpere m dịka ọ na-ahụ ọchịchọ obi m. Gịnị kwesịrị ịhụ n’obi m ka a zaa ekpere m?
"Ọ bụrụ na ị nọ n'ime m, okwu m ga-anọdụkwa n'ime gị, ị ga-arịọ maka ihe ị chọrọ, a ga-emere gị ya." Jọn 15: 7. Ndị a bụ otu okwu Jizọs ga - adịgide ruo mgbe ebighi ebi. Ebe ọ bụ na o kwuru ya, a ga-enwetakwa ya. Otutu ndi mmadu ekwenyeghi na o kwere omume inweta ya, na ha ga-enweta ihe ha kpere n’ekpere. Mana ọ bụrụ na enwere m obi abụọ, ana m enupụ isi megide Okwu Jizọs.
Zaa ekpere m: wepu ajọọ omume ma nọrọ n’okwu Ya
Azịza nye ekpere m: nke bụ bụ na anyị nọgide na Jizọs ma na okwu ya na-anọgide na anyị. Okwu ahụ na-achị site n'ìhè. Anọ m n'ọchịchịrị ma ọ bụrụ na m nwere ihe m zoro ezo, ya mere enweghị m ike ọ bụla n'ebe Chineke nọ.Nmehie na-ebute nkewa n'etiti Chineke na anyị ma na-egbochi ekpere anyị. (Aịsaịa 59: 1-2). Ya mere, a ga-ewepụ mmehie niile na ndụ anyị ruo n’anyị nwere ìhè. Nka bu kwa ogo ayi g’enweta otutu amara na ike. Onye ọ bula nke nānọgide nime ya adighi-emehie.
"Ikpesi ekpere ike ma onye na-ekpesi obi ike n’ebe onye ezi omume nọ bara ezigbo uru ”. Jemes 5:16. Devid kwuru n’Abụ Ọma 66: 18-19: “Ọ bụrụ na mụ atụlee ajọ omume n’obi m, Onyenwe anyị agaghị anụ. Ma n’ezie, Chineke gere m ntị; Ọ attentionara ntị n’olu ekpere m. “Aghara ịdị ndụ m na-akwụsị ọ bụla ọzọ na-enwe ọganihu na ngọzi na Chineke, n'agbanyeghị otú ekpere m. Ekpere m niile ga-anata naanị azịza a: Wepu ajọ omume na ndụ gị! Agam achọta ndu nke Kraist naani dika m di njikere itufu ndu m.
Ndi-okenye nke Israel we bia iju Jehova, ma O siri, Ndikom ndia emewo ka arusi nile ha guzosie ike n’ime obi ha ... M’gagh ekwe ka ha juam? Ezikiel 14: 3. Ihe ọ bụla m hụrụ n’anya n’abụghị ezi uche na nnabata nke Chineke bụ ikpere arụsị ma a ga-ewepụrịrị ya. Echiche m, uche m na ihe niile m ga anọnyere Jesu, ma Okwu Ya ga-anọgide n’ime m. Mgbe ahụ m nwere ike ikpe ekpere maka ihe m chọrọ ma a ga-emere m ya. Kedu ihe m chọrọ? Achọrọ m ihe Chineke chọrọ. Uche Chineke maka anyi bu ido anyi ocha: ka anyi dabakota n’onyinyo nke Okpara Ya. Ọ bụrụ na nke a bụ ọchịchọ m na nke obi m, apụrụ m ijide n’aka na m chọrọ imezu ma zaa ekpere m niile.
Ọchịchọ miri emi imezu uche Chineke
Anyị nwere ike iche na anyị nwere ọtụtụ ekpere ndị a na-azaghị, mana anyị lebara okwu ahụ anya nke ọma ma anyị ga-ahụ na anyị ekpeela ekpere dịka uche anyị siri dị. Ọ bụrụ na Chineke zara ekpere ndị ahụ, ọ gaara emerụ anyị. Ayi agagh enwe ike imefe ihe bu uche ayi na Chineke, amara ikpuru mmadu a nime Jisos, ma ya onwe ayi gekpe kwa ayi ikpe. Mmụọ Nsọ na-ekpere anyị ekpere dịka uche Chineke si dị, ọ bụghị dịka uche anyị si dị.
Anyị ga-enwe mmechuihu mgbe niile ma ọ bụrụ na anyị na-achọ uche anyị, mana anyị agaghị enwe mmechuihu ma ọ bụrụ na anyị na-achọ uche Chineke.anyị ga-atọgbọ kpamkpam ka anyị wee zuo ike na atụmatụ Chineke mgbe niile ma duzie ndụ anyị. Anyị anaghị aghọta atụmatụ na uche Chineke oge niile, mana ọ bụrụ na ọ bụ ọchịchọ obi anyị ịnọrọ n’uche Ya, anyị ga-echekwa n’ime ya, maka na Ọ bụ Onye Ọzụzụ Atụrụ Ọma na Onye nlekọta anyị.
Anyị amaghị ihe anyị kwesịrị ikpe ekpere maka ya dị ka anyị kwesịrị, mana mmụọ nsọ na-arịọchitere anyị arịrị nke na-enweghị ike ikwu okwu. Ndị ahụ na-enyocha obi maara ihe mmụọ nke mmụọ bụ ma na-arịọchitere ndị nsọ arịrịọ dịka uche Chineke si dị (Ndị Rom 8: 26-27). Chineke na-agụ ihe Mmụọ Nsọ chọrọ n'ime obi anyị ma a na-anụ ekpere anyị dịka ọchịchọ a si dị. Anyị ga-anata naanị obere ihe na Chineke ma ọ bụrụ na ọchịchọ a pere mpe. Anyi n’ekpe nani okwu efu n’enweghi ike erute n’oche eze Chineke ma o buru na ochicho obi di omimi a adighi n’azu ekpere anyi. Ọchịchọ nke obi Jisọs dị ukwuu nke na ọ gosipụtara onwe ya n'arịrịọ na ịkwa akwa. Ha wụsara onwe ha, dị ọcha ma doo anya site na obi ya, a nụkwara ya n'ihi egwu dị nsọ Ya. (Ndị Hibru 5: 7.)
Anyị ga-anata ihe niile anyị na-arịọ ma ọ bụrụ n ’ọchịchọ anyị niile bụ maka egwu Chineke, n’ ihi na anyị achọghị ihe ọbụla ma ọbụghị ya. Anyị ga-enwe afọ ojuju n'otu aka ahụ agụụ na-agụ anyị na akpịrị ịkpọ nkụ maka ikpe ziri ezi. Ọ na-enye anyị ihe niile metụtara ndụ na ntinye.
N’ihi ya, Jizọs kwuru na anyị ga-ekpe ekpere ma nata, ka ọ ourụ anyị wee zuo ezu. O doro anya na ọ ourụ anyị ga-ezu mgbe anyị natara ihe niile anyị chọrọ. Nke a na - akwụsị ndakpọ olileanya niile, nchekasị, nkụda mmụọ, wdg. Anyị ga-enwe obi ụtọ na afọ ojuju. Ihe niile na - arụkọ ọrụ ọnụ maka ọdịmma anyị ma ọ bụrụ na anyị atụọ egwu Chineke, mgbe ahụ ka a ga - atụkwasara anyị ihe ndị dị mkpa na ndị ga-adịru nwa oge dị ka onyinye. Agbanyeghị, ọ bụrụ na anyị achọọ nke anyị, ihe niile ga-egbochi atụmatụ anyị na nchekasị, ekweghị ekwe na igwe ojii nke nkụda mmụọ ga-abata na ndụ anyị. Ya mere, buru onye so n’uche Chineke ma i gha achota uzo iji zue oke onu - baa uba niile na amamihe di na Chineke.